स्वास्थ्य – Page 5
किन खाने हरियो फर्सी ? यस्ता छन् अचुक फाइदा, कमलपित्त देखि छाती पोल्ने समस्या सम्म
एजेन्सी । फर्सी तरकारीको एक प्रकार जुन लहरामा फल्छ। प्रायः सबै ठाउँमा उत्पादन हुन्छ। फर्सीको लहराको मुन्टा, पात, फूल र फल सबै उपयोगी हुन्छ । फर्सीमा भिटामिन ‘ए’ प्रशस्त पाइन्छ । आवश्यक...
ब्लडप्रेशरको अचुक औषधी हो कर्कलो
कर्कलो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो स्वादमा निकै मिठो हुन्छ । यो प्राय मानिसहरुको भान्सामा नियमित पाकिने तरकाली हो । कर्कलो को पात हरु...
बेलायतले २१ लाख डोज कोरोना खोप नेपाल पठाउँदै, ८ लाख आज काठमाडौं आइपुग्यो
काठमाडौं, २४ माघ । बेलायतले नेपाललाई पठाउन लागेको २१ लाख डोज कोरोना खोपमध्ये ८ लाख डोज आज काठमाडौं आइपुगेको छ । नेपालको लागि बेलायतकी राजदूत निकोला पोलिटले सामाजिक सञ्जाल ट्वीटर मार्फत यो...
मुटु स्वास्थ्य राख्न चाहानुहुन्छ खानुहोस तोरीको साग, यस्ता छन् अन्य फाइदाहरु
काठमाडौ- तोरीको साग स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । यो प्राय धेरै जसो मानिसको भान्सामा पाकिने तरकारी पनि हो । यो गाउ घरमा सहजै रुपमा छरेर...
यौन सम्बन्ध महिनावारीका बेला राख्नु हुन्छ कि हुदैन ? यस्ताे छ फाइदा
एजेन्सी । साधारणतया कोही पनि स्वस्थ महिलाको महिनावारीका बेला हुने रक्तश्राव तीनदेखि पाँचदिनसम्म रहन्छ । यसले कतिबेला निकै तनाव पनि दिने गर्छ विशेषगरी बाहिर जानुपर्ने अवस्थामा । तर कतिपय अवस्थामा आफ्नो महिनावारीको रक्तश्रावलाई...
महिनावारी गडबडीलाई निको पार्न देखि क्यान्सर लाग्नबाट बचाउने कुरिलो खानुका यस्ता छन् फाइदा
काठमाडौं – हाम्रो भान्सामा उपलब्ध हुने अधिकांश सागसब्जीमा औषधीय गुण रहेका हुन्छन् । तर, तिनको प्रयोग कसरी गरिन्छ भन्नेले फाइदा र बेफाइदा गर्छ । हरियो सागशब्जीमा आफैँमा फाइदाजनक हो । अझ कुरिलोमा...
काठमाडौँ-हुन त बजारमा वा तपाईँको करेसावारीमा विभिन्न प्रजातीका सागहरु सजिलै पाउन सकिन्छ । तर, तपाईँले प्रयोग गर्ने सागहरुको प्रजातीमध्ये एक हो फर्सीको मुन्टो वा भनौ फर्सीको पातको साग । उसो त फर्सी...
के तपाइलाई ग्याष्ट्रिकले सतायो ? नआत्तिनुहोस घरमै बनाउन सकिन्छ ग्याष्ट्रिक निको पार्ने औषधी
मानिसको सही आहार बिहार नभएर धेरैजसो रोगी भएका छन् । खान नपाएर भन्दा पनि खान नजानेर रोगी छ हिजो आज। अल्छी स्वभाव विकसीत हुनु अत्याधुनिक जीवनशैली, कम ब्यायाम, मीसावट युक्त अन्न, बिशादीपूर्ण...
किन सताउँदैछ मनरोगले ?
कलिला बालबालिका किन आत्महत्या गर्न उक्सिदैछन् ? किशोर-किशोरीहरू किन लुकीछिपी लागुऔषधको लतमा फसिरहेका छन् ? दम्पतीहरू किन सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछन् ? यी सबैको एउटै जवाफ हो, उनीहरुको मनोदसा ठीक छैन । के...
फेब्रुअरी ४ अर्थात् आज (शुक्रवार) विश्व क्यान्सर दिवस । नेपालमा पनि विभिन्न सचेतना मुलक कार्यक्रहरु गरेर यस वर्ष ‘बढ्दैछ चुनौति क्यान्सरको, पहुँच बढाऔँ स्याहार’को भन्ने नारासहित क्यान्सर दिवस मनाइएको छ । पछिल्लो...